Ukufaka isicelo kunye nokusetyenziswa | Umbutho wokukhuthaza inkcubeko kwiwadi yeOta
Urenta njani indawo>
Sebenzisa izibonelelo, "Ubhaliso loMsebenzisi we-Uguisu Net" luyafuneka.Ngeenkcukacha, jonga "Yintoni i-Uguisu Net?".
Indawo nganye yamkela usetyenziso lokusetyenziswa kwilottery.Kwizibonelelo ezingenamntu emva kwelotto, izicelo ngokubanzi ziya kwamkelwa kwindawo yokuqala eza kuqala.
Ilotto / indlela yokwenza yahlukile ngokuxhomekeka kwigumbi olisebenzisayo.Ngeenkcukacha, nceda ubone itafile yokusebenzisa igumbi ngalinye.
(* UMuroba ligama elimele igumbi ngalinye lendawo yokuhlangana, ibala lebhola, ibala lebhola, njl njl.
Kwimirhumo yokusetyenziswa kwesibonelelo kunye nemirhumo yokusetyenziswa kwezixhobo, jonga iphepha lesishwankathelo / iphepha lezixhobo kwigumbi ngalinye.
Ukongeza, nceda uhlawule umrhumo wokusetyenziswa ngexesha lokufaka isicelo kunye nentlawulo yokusetyenziswa kwezixhobo ngaphambi kokusebenzisa igumbi.
Intshayelelo yeOta Ward Plaza
IHolo yeWadi yeWadi / iAprico Intshayelelo
IDaejeon Bunkanomori Intshayelelo
Ukuba isetyenziswa liqela lolutsha elilinganisela ishishini, iqela lolutsha, iqela lolutsha, okanye iqela labantu abakhubazekileyo, kwaye umsitho ungowomntu wonke, umrhumo wokusetyenziswa kwesibonelelo uya kuncitshiswa okanye uxolelwe.
Ukuba ungaphandle kwewadi, uya kuhlawuliswa intlawulo eyongezelelweyo nge-20% kwintlawulo eyintloko yesibonelelo.
(Kwimeko yokusetyenziswa kwentengiso yeempahla, akukho ntlawuliso ngenxa yokusetyenziswa ngaphandle kwewadi)
Xa uthengisa iimpahla ngeenjongo zenzuzo, i-50% yentlawulo esisiseko yoncedo iya kongezwa.
Nceda ubone uluhlu lwamaxabiso eziko ngalinye lokuhlelwa kwexesha lokusetyenziswa.
Ixesha lokusebenzisa libandakanya ixesha elifunekayo ukulungiselela nokucoca.Ukufakwa kunye nokurhoxiswa kwezixhobo ezibonwayo ezibonwayo kunye nezinto ezenziweyo ngabasebenzi beziko lolondolozo lwembali nazo ziya kwenziwa ngexesha lokusetyenziswa.
Nceda uqiniseke ukuba ubambelela ngokungqongqo kwisiphelo ngaphakathi kwexesha lokusetyenziswa.
Ukuba ungenisa ukutya, iziselo, iintyatyambo ezintsha, okanye imithwalo evela ngaphandle, nceda ungene ngaphakathi nangaphandle kwexesha lokusetyenziswa.
Kwiimeko ezilandelayo, ukusetyenziswa kwezixhobo akunakwamkelwa.Ukongeza, nokuba sele uyivumile, sinokurhoxisa, sinciphise okanye sikunqumamise ukusetyenziswa
Xa kukho umngcipheko wokonakalisa ucwangco loluntu okanye isimilo esihle kunye namasiko.
Xa kukho umngcipheko wentlekele eyenzeka kumsitho osebenzisa izixhobo eziyingozi.
Xa kukho umngcipheko wokonakalisa okanye wokuphulukana noncedo okanye izixhobo ezincedisayo.
Xa ilungelo lokusebenzisa lidlulisiwe okanye lincitshisiwe.
Xa yamkelwe ukuba ikumdla wombutho onokwenza ubundlobongela, ukungcungcutheka, njl.
Xa injongo yokusetyenziswa okanye iimeko zokusetyenziswa zinyhashwa.
Xa indawo ingafumaneki ngenxa yentlekele okanye ezinye iimeko.
Xa kukho ingxaki yolawulo kwiziko, njengaxa usenza ingxolo enkulu.
* Iimoto ezihambisa umbane azinakusetyenziswa kuba ingxolo kunye negesi yokukhupha ziphazamisa ubumelwane.
Utshintsho kunye nokucinywa komhla wokusetyenziswa
Ukuba kukho utshintsho kumhla kunye nexesha lokusetyenziswa, igumbi lokusetyenziswa, njl., Ungayitshintsha inkqubo.Nceda ufake isicelo sokutshintsha ngexesha lokwamkelwa kwesicelo elichaziweyo kwindawo nganye.Nceda uyeke ukutshintsha-tshintsha okanye urhoxise ukusetyenziswa emva kokutshintsha umhla wokusetyenziswa, njl.njl.
* Sebenzisa imvume, irisithi, kunye netywina lomntu ofaka isicelo (uphawu lwesitampu aluvumelekanga) ziyafuneka kwisicelo.
Izicelo ziya kwamkelwa kuphela kwindawo oya kuthi usebenzise kuyo.
Ixesha lokwamkelwa kwesicelo
Iholo enkulu / iholo encinci / igumbi lomboniso Umhla wokusetyenziswa
Kwiiveki ezi-1 ezidlulileyo
* Kwimeko yecandelo lesi-5 lesitudiyo somculo, kude kubethe intsimbi yesi-7: XNUMX ngosuku Ngomhla
Ngaphambi kwexesha lokusebenzisa
Iholo, igumbi elinenjongo ezininzi, ikona yemiboniso, indawo evulekileyo Umhla wokusetyenziswa
* Kusasa, kwimeko yodidi lokuqala, kude kube lusuku oluphambi komhla wokusetyenziswa Ngomhla
Ukuphathwa kwemirhumo yokusebenzisa ngenxa yotshintsho okanye ukurhoxiswa
Nokuba umququzeleli urhoxisa ukusetyenziswa ngenxa yeemeko zakhe, intlawulo yokusebenzisa ehlawulelweyo ayinakubuyiselwa kumgaqo.Nangona kunjalo, ukuba ukurhoxiswa kuceliwe kwaye kwamkelwe ngaphambi komhla wokusetyenziswa ochaziweyo, umrhumo wokusetyenziswa kwendawo uza kubuyiselwa imali ngolu hlobo lulandelayo.
* Ukuba umrhumo wosetyenziso otshintshiweyo ungaphezulu komrhumo wokusetyenziswa kwangoko, kuya kufuneka uhlawule umahluko.
* Ukuba urhoxisa emva kokutshintsha komhla wokusetyenziswa, imali ebuyiswayo yenkonzo ehlawulwayo ingahluka.
* Ukuze ubuyisele umrhumo wokusetyenziswa, ileta yokuvunywa kokusetyenziswa, irisithi, kunye nesitywina somenzi-sicelo (uhlobo lwesitampu aluvunyelwe) luyafuneka.
Ukubuyiselwa imali eyi-50%
Ukubuyiselwa imali eyi-25%
Igumbi elikhulu lokunxiba
Ukuya kwiintsuku ezingama-90 ezidlulileyo Umhla wokusetyenziswa
Ukuya kwiintsuku ezingama-60 ezidlulileyo Umhla wokusetyenziswa
Ukuya kwiintsuku ezingama-30 ezidlulileyo
Inqanaba elikhulu leholo kuphela
Iholo encinci / igumbi lomboniso
Ukuya kwiintsuku ezingama-30 ezidlulileyo Umhla wokusetyenziswa
Ukuya kwiintsuku ezingama-15 ezidlulileyo
Igumbi lokuhlangana, igumbi laseJapan, igumbi leti, igumbi lokuziqhelanisa
Ijimnasiyam / igumbi lobugcisa / isitudiyo somculo
Ukuya kwiintsuku ezingama-7 ezidlulileyo Umhla wokusetyenziswa
Ukuya kwiintsuku ezingama-2 ezidlulileyo
Igumbi leholo / leenjongo ezininzi
Igumbi lokuhlangana / iworkshop yokuyila
Uhlobo lwamaJapan kunye nezitudiyo ezahlukeneyo